के तपाई बाथरूमबाट टेक्स्ट गर्नुहुन्छ? | Martech Zone
बिहीबार, अक्टुबर 20, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 एडम सानो
संभावनाहरू राम्रो छन् कि तपाई बाथरूमबाट टेक्स्ट गर्नुहुन्छ ... वास्तवमा out मध्ये २ जनाले यो गरिरहेको स्वीकार गरे। यो प्रकारको मलाई अब कसैको मोबाईल फोन उधारो लिने सोच्दै बाहिर कमाउँछ! हामी यसको कदर गर्दछौं जब हाम्रा ग्राहकहरूले हाम्रो टेक्स्ट सन्देश सेवाहरू प्रयोग गर्दछन् ... तर उनीहरूले राम्रोसँग धन्यवाद गर्दछन् ती खास गरी एक भन्दा बाहिरका छन् घर बिक्री को लागी! तपाईका २/ 2rd भाग को रूप मा ... म आशा गर्दछु कि तपाईहरुसँग टच स्क्रिनहरु छन् र अरु एक तिहाई किबोर्डहरु छन्।
फिल्म सिनेमाघरमा पाठ पठाउँदै ती मध्ये ... हो, हामी तपाईलाई देख्छौं। म उत्सुक छु कि किन थिएटरहरूले मोबाइल फोन ब्लकरहरू स्थापना गरेनन्। यदि मैले कसैको जस्टिन बीबर रिंगटोन सुन्नु नपर्यो भने म एक अतिरिक्त हिरानी फिल्म भुक्तान गर्छु! Tatango मा मान्छेहरु लाई हिलाहारी को लागी धन्यवाद ... म अब आफ्नो हात धुने जाँदैछु।
भविष्य मा माइक्रोसफ्ट शामिल हुनेछ
हाम्रो इन्फोग्राफिक पोस्टिंग को लागी धन्यवाद!
राम्रो, म 1/3 मा छु जुन2नम्बर गर्दा गर्दैन। हामी त्यस्तै विशेष छौं हाहाहा